ကင်ဆာရောဂါ၏ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » ကင်ဆာရောဂါ၏ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများ
Posted by ခင်ခ on Oct 24, 2012 in Facebook, Health & Fitness | 20 comments
မိန်းကလေးအများစုက ကိုယ်အလေးချိန် လျော့နည်းသွားတာကို သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ပါဘဲ၊ အစားအသောက် လျော့စားတာမျိုး မရှိပါဘဲ တစ်လအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ပေါင်လောက် ရုတ်တရက် ကျသွားတဲ့အခါ စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းတာက ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိသလို တခြားအကြောင်းဖြစ်တဲ့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ များနေတာ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ပြသပါ။ ဆရာဝန်က သိုင်းရွိုက်ဂလင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တခြားအင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေကို CT ရိုက်ပြီး စစ်ဆေးတာတွေ ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
လေပွတာက အများစုမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သားဥအိမ်ကင်ဆာမှာလည်း လေပွတာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သားဥအိမ်ကင်ဆာမှာ တခြားလက္ခဏာတွေ အနေနဲ့ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်တာ၊ တင်ပါးဆုံရိုးတွေ နာကျင်တာ၊ အစာနည်းနည်းပဲ စားပြီး ပြည့်အင့်နေတာ၊ ဆီးသွားချင်တာနဲ့ ထွက်ကျတာကြောင့် အိမ်သာကို အပြေးသွားရတာတွေပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လေပွတာကို နေ့စဉ်ခံစားနေရပြီး ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အထိ ခံစားနေရတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်ပါ။
အမျိုးသမီးအများစုက ရင်သားကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ရင်သားမှာ တစ်ခုခု ထူးခြားတိုင်း ကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာလို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ရင်သားတစ်ဝိုက်မှာ ရှိတဲ့ အရေပြားနီရဲတာ၊ ထူလာတာတွေက ကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာ တစ်ရပ်ဖြစ်ဖို့ အလွန်ခဲယဉ်းပေမယ့် ပြောင်းလဲမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိလာတဲ့အခါ ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး စစ်ဆေးမှု ခံယူတာက အကောင်းဆုံးပါ။ အဖု၊ အကျိတ် စတဲ့ပြောင်းလဲမှု တစ်စုံတစ်ရာကို သင်သတိထားမိခဲ့ရင်လည်း ဆရာဝန်နဲ့ ပြသ စစ်ဆေးရပါမယ်။ ရင်သားမှာ ပြောင်းလဲမှု တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဆရာဝန်က သင်ရဲ့ရောဂါ ရာဇဝင်ကို မေးမြန်းတာ၊ ရင်သားကို စစ်ဆေးတာ၊ လိုအပ်တဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်တာတွေကို ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။
သွေးမဆုံးခင် အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ရာသီလာချိန် မတိုင်ခင် သွေးဆင်းတာက စောတတ်ကြပေမယ့် သွေး ဆုံးပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ ရာသီသွေး ပြန်ဆင်းတယ် ဆိုရင်တော့ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ သားအိမ်ကင်ဆာရဲ့ အစောဆုံး လက္ခဏာရပ် ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် သားဖွားမီးယပ် အထူးကုနဲ့ ပြသတိုင်ပင်ဖို့ လိုပါတယ်။
အများစုက အရေပြားကင်ဆာ ရောဂါကို ကြိုတင်သိမြင်နိုင်ဖို့ အရေပြားမှာရှိတဲ့ မှဲ့တွေရဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရမယ် ဆိုတာ သိပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မှဲ့တွေတင်မကဘဲ အသားအရေရဲ့ အရောင်ပြောင်း လဲမှု၊ အရေပြားက သွေးထွက်တာ၊ အရေပြားကွာကျမှု များတာတွေကိုလည်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။ ထူးခြားမှုတစ်ခုခု ရှိပါက အချိန်ကြာကြာ စောင့်မနေဘဲ အရေပြား အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ပြသစစ်ဆေးပါ။
အစားအသောက်စားရာမှာ သင့်အနေနဲ့ မျိုချရ ခက်ခဲနေပါသလား။ အစာအမာတွေ အစား အရည်ပြောင်း စားပေမယ့် မျိုချရ ခက်ခဲတာ မသက်သာဘဲ ဖြစ်နေပါသလား။ အစာအိမ်ကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာရပ် တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆီးသွားတဲ့အခါ ဆီးထဲမှာ သွေးပါတာ၊ ဝမ်းသွားတဲ့အခါ ဝမ်းထဲမှာ သွေးပါတွေက အူမကြီးကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ကတော့ မိန်းမကိုယ်က ဆင်းတဲ့ ရာသီသွေးနဲ့ ခွဲခြားသိဖို့ လိုပါတယ်။ ဆရာဝန်ဆီ ပြသပြီး စစ်ဆေးမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။ ဆီးအိတ်ကင်ဆာ၊ ကျောက်ကပ် ကင်ဆာတွေ ဟုတ်၊ မဟုတ်ပါ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
တချို့အမျိုးသမီးတွေက ဝမ်းဗိုက်ရဲ့ နာကျင်မှု ခံစားရတဲ့အပေါ်မှာ စိတ်ဓာတ် ကျဆင်းတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုနဲ့ ပန်ကရိယ ကင်ဆာက ဆက်စပ်မှု ရှိနေပေမယ့် ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းပြချက် ကိုတော့ ရှင်းပြရ ခက်ခဲတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသမီးအများစုက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခါစမှာ အစာမကြေတာ၊ ကိုယ်အလေးချိန် အနည်းငယ် တက်လာတာမျိုး တွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ အစာမကြေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အစာ ရေမျိုကင်ဆာ၊ အစာအိမ်ကင်ဆာနဲ့ လည်ချောင်းကင်ဆာတွေရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ တစ်ရပ် ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ပေါ့ဆ မနေသင့်ပါဘူး။ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်ပါ။
ဆေးလိပ်သောက်သူတွေရဲ့ ခံတွင်းမှာ အဖြူရောင် အဖတ်လေးတွေ၊ လျှာပေါ်မှာ အဖြူရောင် အစက် အပြောက်တွေ တွေ့ရှိပါက သတိပေး လက္ခဏာရပ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက ခံတွင်းကင်ဆာရဲ့ ရှေ့ပြေး လက္ခဏာရပ်တွေ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ပါ။
အသက်အရွယ် ရလာသူတွေမှာ နာကျင်တယ်၊ ကိုက်ခဲတယ် ပြောတတ်ကြပါတယ်။ အဲလို နာကျင် ကိုက်ခဲ မှုတွေက နေရာအတိအကျ မပြနိုင်ဘဲ ဝိုးတိုးဝါးတား ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကင်ဆာရောဂါရဲ့ အစောဆုံး လက္ခဏာ ရပ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကင်ဆာဖြစ်တဲ့ နေရာက နာကျင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နာကျင်မှုတွေကို ဆက်တိုက်ခံစားနေရတယ် ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်ပြီး စစ်ဆေးမှုကို ခံယူပါ။
တုပ်ကွေးဖြစ်တာ၊ ပိုးမွှားကူးစက်တာတွေကြောင့် ဖျားနာမှုတွေ ခံစားရနိုင်တယ် ဆိုပေမယ့် မကြာခဏ ဖျားနာ နေရင်တော့ ဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါက စဖြစ်တဲ့ နေရာကနေ တခြားတစ်နေရာကို ပျံ့နှံ့နေတဲ့ တချို့ ကင်ဆာရောဂါ တွေမှာလည်း ဖျားနာတာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အသားဝါပြီး ဖျားနာတယ်ဆိုရင်တော့ သင့် အသည်း အတွက်ပါ အလေးထား ဂရုပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နုံးခွေတာက ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွတ်သွားနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါပဲ။ နုံးခွေတာက သွေး ကင်ဆာ၊ အစာအိမ်ကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာ ရောဂါတွေရဲ့ အစောဆုံး လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်နေနိုင်တာ ကြောင့်ပါ။
တုပ်ကွေး အအေးမိတာ၊ ဓာတ်မတည့်တာတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ် ချောင်းဆိုး ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချောင်းဆိုးတာက သုံး- လေးပတ်ကြာ ချောင်းဆိုးနေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသစစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဇာခြည်ဝင်း (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရဲ့ ရေးသားတင်ပြချက်လေးပါ။ ခင်ခ FB ထဲကိုရောက်လာလို့ ပြန်ပြီး ဗဟုသုတအဖြစ်သိရအောင် မျှဝေတင်လိုက်တာပါဗျာ။
ရှေ့ပြေး လက္ခဏာတွေကို မှတ်သွားပါတယ်…ကိုခင်ခရေ….
အဲ့ထဲကမှ နှင်းနှင်းကိုယ်တိုင်လည်း gastric ရှိလို့ရောပြီး ရက်ရှည်လေပွတာ ဆေးတွေ
သောက်ရပြီ၊ တင်ပဆုံရိုးကလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် နာပြီဆိုရင်ကြောက်ပြီး သားဥအိမ်
ကင်ဆာများလားဆိုပြီး စိတ္တဇလို တွေးမိတတ်ပါတယ်။ ဆေးစာအုပ်တွေဖတ်ပြီး တခါတခါ
ကျရင်လည်း ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ရင် စိတ်က နေစရာမရှိသလိုပဲ ခံစားရတယ်။ သွေးသား
ရင်းထဲကလည်း ဒီကင်ဆာရောဂါဆိုးနဲ့ပဲ တွေ့ကြုံခံစား ဆုံးပါးသွားကြတာဆိုတော့လေ…
Hnin Hnin ရေ….
အစာအိမ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် “ပျားရည်” ကို မနက်စောစော အစာမစားခင်
ဒီနည်းကအန္တရယ်မရှိတဲ့အပြင် ကိုယ်တွေ့ မို့ ညွှန်းရဲတာပါ။
တစ်ခါတစ်လေ အောင့်တာဖြစ်ရင် တစ်ဇွန်းလောက်မျိုပြီးရေသောက်လိုက်ပါ။
ဘာဝေဒနာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့..လုပ်ကြည့်ပါမယ်..ကျေးဇူးပါနော်….the best ရေ…
မထင်မှတ်ထားတဲ့ အကြံပေးချက်မို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
ကိုခင်ခရေ…ကင်ဆာအကြောင်းဖတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပေမယ့် မေမေ့
သတိရပြီး မခံစားနိုင်ဖြစ်သွားလို့ပါ…ရေးရင်းနဲ့တောင် မျက်ရည်ကျတဲ့အထိပဲ..
‘သောက’ တွေ အများကြီးရှိပေမယ့် ‘ကျန်းမာရေးသောက’ က သွေးရင်းအတွက်
အဆိုးရွားဆုံးနဲ့အခံစားရဆုံးပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သိသလောက် သတိနဲ့နေ၊
စစ်ဆေး၊စမ်းသပ်ပါတယ်….မူမမှန်တာရှိမယ်ထင်ရင် ဆရာဝန်လည်း ပြပါမယ်..
ကျေးဇူးပါ သိသင့်သိထိုက် တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမို့ ကူးယူထားလိုက်ပါတယ်။
ဦးဆုံးမန့်သူ နှင်းနှင်းရေ ကြောက်ရဖို့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဗဟုသုတအတွက်ရယ် တစ်ခုခုစိတ်ဘ၀င်မကျရင်လည်း
စဉ်စားလို့တွေးလို့ရအောင်ရယ်ပါ။ ဆရာဝန်နဲ့တော့ ဆွေနွေးပေါ့နော်။
မမေရေ ဘာဘဲဖြစ်ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိထားတာတော့ကောင်းတယ်ထင်လို့ share ဖြစ်တာလေ။
အိုကျနော်က တော့ တစ်ခုခုမသင်္ကာရင် ကိုခဆီပြေးလာမယ်
ကင်ဆာရောဂါ မဖြစ်ခင်မှာ တစ်ရက် ရေနွေးကြမ်း ၂ လီတာ
ပုံမှန်သောက်သုံးပေးပါက ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်
လူတိုင်းကြောက်ကြတဲ့ ရောဂါဆိုးကို နုတုန်းအချိန်မှာ သတိထားမိတာ အကောင်းဆုံးဘဲမို့ ကိုခင်ခ ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားရင်း ထုံးစံအတိုင်း ပရင့်တွေ အများကြီးထုတ်သွားတယ်နော်…
မန်းလေးမှာ ရောဂါအကြောင်းတွေ မဆွေးနွေးလိုက်ရတာနာတာပဲ :harr:
ဦးဦးခရေ …….. သေချာဖတ်ပြီး မှတ်သားသွားပါတယ် …. ဒီကင်ဆာရောဂါဆိုးကြီးမှလည်း လူတွေကင်းလွတ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ……….
အမြဲအားပေးဝေမျှနေသူ candle ရေ ကျေးဇူးတင်ရပြန်သပေါ့။
မနိုရေ ဒေါက်တာဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ဖတ်မိတာလေးတွေ ပြန်ဝေမျှရုံပါဘဲ။ နောက်မန်းရောက်လို့ အချိန်လေး ရရင် ထပ်ဆုံတွေ့ပြီး စကားဝိုင်းလေးဖွဲ့ကြတာပေါ့နော်။
မမခိုင်ရေ လူကိုယ်ခန္ဒာထဲကအရာတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်ပြီးသေဆုံးမှု့က ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးပါတဲ့။
အဲဒီတော့ ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကံစီမံရာပေါ့။
အန်ကယ်ရေ … မန်းလေးဆိုလို့ …. မန်းလေးရောက်တုန်းက .. စနစ်တကျ အစီစဉ်ဆွဲပြီး …ရတဲ့ အချိန်လေးနည်းနည်းမှာပဲ ….မန္တလေးဘုရားတွေနဲ့ ၊ ပြင်ဦးလွင်က နေရာအတော်များများကို ကိုယ်တိုင် ကားနဲ့ အပင်ပန်းခံ လိုက်ပို့ ခဲ့တာတွေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်နော် ။ အရမ်းကို အကွက်စေ့ပြီး စီစဉ်ထားတာတွေ့ရတော့ အားတောင်နာမိပါတယ် ။ ဧည့်ဝတ်ကျေခဲ့တဲ့ မဒမ်ခင်ခကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ။
တဆက်တည်းမှာပဲ …. အန်ကယ်ဆွဲပေးတဲ့ schl ထဲက အစီစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စစ်ကိုင်းနဲ့ မင်းကွန်း ဘုရားတွေဘက်သွားတဲ့အခါ ၊ အလုပ်ကနေ ခွင့်ယူပြီး တကူးတကကိုလိုက်ပါ ဂိုက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ လေးပေါက်ကြီးနဲ့ … မဒမ်ပေါက်ကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။ လေးလေးတို့ဂိုက်လုပ်ပေးလို့ ၊ မသိသေးတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေ နားလည်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။
ရေစပ်နားမှာ ၀ိုင်းဖွဲ့ဒင်နာ အတူစားရင်း စကားကောင်းခဲ့တဲ့ ညလေးကို ပြန်သတိရမိတယ် ။
မွန်းကြပ်မှုတွေ ဘာမှ မရှိပဲ … စိတ်ရင်းနဲ့စကားတွေ ပြောရင်း ရယ်မောပျော်ရွှင်ခဲ့ကြရတဲ့ ထမင်းစားဝိုင်းလေးကို အတွေးထဲမှာ မြင်ယောင်လိုက်ရုံနဲ့ နွေးထွေးနေတုန်းပဲ ။
အလုပ်များပါလျှက် တမင်အချိန်ပေးပြီး ဟိုတယ်ထိ တကူးတကလာဆုံ၊ လက်ဆောင်တွေပေးသွားခဲ့တဲ့ ချစ်ကိုကြီး ကပေနဲ့ အစ်မပုခ်ျ ၊ လျှပ်တပြတ်ရောက်လာပြီး၊ လက်ဆောင်လာပေးခဲ့တဲ့ ဖရဲသီး တို့ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ။ မန္တလေးက ရွာထဲကစာရေးသူတွေ ၊ စာရေးကောင်းရုံတင်မဟုတ်ဘူး ၊ ဧည့်ဝတ်လည်းကျေပွန်ကြတယ် ။ အရမ်းကို အားကျလေးစားမိပါတယ် ။
သမီး အိတုံရေ ဒါတောင်အချိန်ရက်လေးနည်းခဲ့လို့ တစ်ချို့နေရာတွေ ချန်ခဲ့ရတာအတွက်
စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ခင်ခမွေးဇာတိနေရာဒေသမှာ ကလေးဘ၀ကြီးပြင်းခဲ့သူချင်းမို့
ပိုပြီးခင်မင်စွာနဲ့ ဧည့်ဝတ်ပြုကူညီခဲ့တာပါ ကျေးဇူးမလိုပါဘူးဗျာ။ ခင်ခင်မင်မင် လာရောက်လည်ပတ်
ဦးခင်ခ ရေ ..
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ဖြစ်ရပါရဲ့ဗျာ ..
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့ပဲ ကျနော်လည်း
ကင်ဆာ ပျောက်စေတဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်းကို ဖတ်လိုက်မိသဗျ …
နည်းကတော့ လွယ်လွယ်လေးပဲ (စာအရပေါ့)
ဗျောက်သီး အမှုန့်ကို ကင်ဆာ ဖြစ်တဲ့နေရာ (ရင်သားဆိုရင် ရင်သားပေါ်ပေါ့) …
တစ်နေ့တစ်ခါ အုံပေးပါတဲ့ …
ပျောက်ပါတယ်လို့ ဆိုထားတယ်ဗျို့ …
ဟုတ်၊ မဟုတ်တော့ သိဘူးရယ် …
ကိုခြောက်မျက်နှာရေ … ။
ကျွန်မ တစ်ခါက ပို့စ်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်.. အပိုင်းဆက်တွေနဲ့ ပို့စ်ပါ …. ။ ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး … ရှင်ကြီးကျားထက်ဆိုးဆိုတဲ့ … ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါ ။
အစာအိမ်ကင်ဆာကို ရေညှိပြားကပ်ရုံနဲ့ ၊ ပျောက်တယ်ဆိုပြီး ၊ တောက လူတွေကို လုပ်စားခဲ့တာပါ ။ခွဲစိတ်ဖို့ မှီသေးတဲ့ အချိန်မှာ လွဲမှားတဲ့ ကုသမှု ခံခဲ့ရပါတယ် ။ ခုတော့ အစာအိမ်ကင်ဆာ ဝေဒနာရှင် ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါပြီး ။ လယ်တွေလည်း ကုန်ပြီး ၊ လူနာလည်း သေခဲ့ပါပြီ ။
ကင်ဆာဆိုတာမျိုးက အချိန်ကြာလေ ။ အမြစ်တွယ်လေမို့ ….. ပြင်ပက ကုသတာနဲ့ ဒီတိုင်း အဖုကျိတ်ကြေသွားတယ်ဆိုတာ ၊ အတော့်တော်ကို ရှားပါးလွန်းပါတယ် ။
ကျွန်မကတော့ အဖုကျိတ်တွေ့ လျှင် မပေါ့စေချင်ပါဘူး ။ သေးသေး ကြီးကြီးတွေ့တဲ့အချိန်က စပြီး ကုသမယ်ဆိုလျှင် … ကင်ဆာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြေများပါတယ် ။
အနော်က ဖတ်မိထားတာကို ရေးပြဒါဘာဂျ ..
အနော့် အနေနဲ့ ပြောရရင်ဒေါ့
အာခေါင် နာတာတောင် လည်ချောင်း ကင်ဆာ ဖြစ်လေသလားဆိုပြီး
ဆေးခန်းကို ပြေးဖို့ ချောင်းနေဒဲ့လူဘာလို့ …
အဟီး..ကျွန်မထက်စိတ်ပူတတ်တဲ့ လူလာတွေ့နေပြီ ….. ကြာသပတေး သိုက်ဘွားလားဟင် … ခွိခွိ ။ ကျွန်မဆိုလည်း … တစ်ခုခု စိတ်ထဲ နေမကောင်းသလို ၊ ခံစားရပြီဆိုလျှင် အဲ့ဒီဖီလင်နဲ့ ကြားဖူးနားဝ ရောဂါတွေ အတွေးထဲမှာတင် ၊ အကုန်လိုက်တိုက်စစ်တော့တာပဲ ။လက်ဆစ်ခြေဆစ်တွေ ကိုက်ပြီးအနေထားသိပ်မမှန်လျှင် ၊ သွေးလေးဖက်နာလိုလို ၊ ကောက်ကွေးလေးဖက်နာလိုလို … ။ ဒါမှ မဟုတ်ပဲ ဗိုက်အောင့်တာမျိုး ၊ ခါးနာတာမျိုးဆိုလျှင် … အူအတတ်များယောင်ချင်ပြန်တာလား ၊ သည်းခြေကျောက်တည်ချင်သလား … အို.. လားပေါင်းများစွာနဲ့ တွေးပူတတ်လွန်းလို့ … အိမ်ကပြောပါတယ် ဘာရောဂါမှ မဖြစ်ဘူး ..စိတ်ရောဂါပါတဲ့လေ …
ရာသီခွင်အရရော ၊ ဇာတာအရပါ …. ကျွန်မက အလကားနေရင်းကို တွေးပြီး ပူတတ်တဲ့ ဗီဇရှိတာကြောင့်ပါ ။
ကင်ဆာဆိုတာ .. မြန်မာ့ အခေါ် မြစ်ပွားနာ အမျိုးစား တစ်ခုပါပဲ ။ သူ့ရဲ့ သဘောသဘာဝကိုက အမြစ်တွယ်ပြီးတာနဲ့ အချိန်အပိုင်းခြား တစ်ခုအတွင်းမှာပဲ ပွားပါရောတဲ့ ။ ဒါကြောင့် အဖု အကျိတ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလျှင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လို့ သဘောမထားပဲ ၊ သေချာအောင် စစ်ဆေးမှုလုပ်သင့်ပါတယ် ။
ကင်ဆာမှာလည်း အဆင့် သတ်မှတ်ချက် အမျိုးမျိုးရှိပြီး ၊ အဲ့ဒီ အဆင့်ပေါ်လိုက်လို့ အန္တရာယ်ပေးနိုင်မှု အနေထားနဲ့ ဆေးကုသလို့ ရမရ ကွာခြားသွားပြန်ပါရော ။ မြစ်ပွားနာမို့ ကိုယ်တွင်းမှာ အမြစ်တွယ်မြန်ပါသတဲ့ ။ ဆရာတစ်ယောက်ပြောခဲ့ဖူးတာတော့ သူက ဆပွား ပွားသတဲ့ … 1လုံးကနေ 2လုံး ၊ 2လုံးကနေ 4လုံး ၊ 4လုံးကနေ 16လုံး အဲ့လိုကို ပွားတာဆိုပဲ ။ ကင်ဆာဖြစ်တဲ့ လူတိုင်း သေကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ နုရင် နုသလို ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ အစိတ်ပိုင်းကို ခွဲ ထုပ်လိုက်တာနဲ့တင် သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း အန်ကယ်ရေ … လူတွေက ပေါ့ဆတာများတယ် ၊ ကင်ဆာကို အော်ပရေးရှင်းလုပ်ထုတ်လိုက်ပြီးလျှင် ခြောက်လတစ်ခါလောက် ပြန်မစစ်ဆေးပဲ ၊ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် မကျန်တော့ဘူးလို့ နေလိုက်ကြတယ် …. ။ တကယ်တော့ … ဖယ်ရှားပြီးလည်း ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေထားမျိုးရှိကြောင်း မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အမှု မဲ့ အမှတ်မဲ့နေရင်းကနေ ၊ ကိုယ်သတိထားမိတဲ့အချိန်ကျတော့ အခါနှောင်းတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ … ။
ခင်ခက ဗဟုသုတလေးရအောင် ဖတ်ဖူးတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလေးတွေကို ကိုယ်သိရသလို
ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့ ရွာသူားတွေလည်း သိရအောင်ဝေမျှပေးရုံပါ။ အနာရောဂါဖြစ်ရင်တော့ ဗဟုသုတရှိထား
တဲ့သူက မရှိသူထက်စာရင် ပိုပြီးစဉ်းစားဆင်ချင်နိုင်မယ်လို့ ယူဆမိလို့ပါ၊ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်နဲ့တော့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပြီး ကုသခြင်းက ကောင်းမွန်ပါကြောင်းပြောပါရစေခင်ဗျ၊ ဖတ်ရှု့သူအပေါင်းနဲ့ ကွန်မန့်ပေးကြသူတွေကိုလည်း ခင်ခမှကျေးဇူးအထူးပါလို့။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် … ဒီရောဂါက အဖြစ်များနေတော့ ဘာမှန်းမသိပဲ ကြောက်နေရတာ …